Iswiidhen oo laga labo labeynayo howl-gal lagu qaado Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maraakiibta dagaalka reer galbeedka oo ku sii jeeda badda Meditireniya. Foto: Maya Alleruzzo/Scanpix.
La daabacay onsdag 28 augusti 2013 kl 11.15
Suurto-galnimada ah in tilaabo militariga oo xadidan laga qaado Suuriya ayaa aad u korartey malmahan kadib weerarkii sunta gaaska ah ee ka dhacey bariga magaalada Damaskus mudo asbuuc laga joogo. Howl-galka militeri darteed ayuu u baajiyey wasiirka Ingriiska booqasho la filayey in uu ku yimaado Stockholm.
Hague ayaa la kulmi lahaa maanta iyo beri dhigiisa Carl Bildt.
Wasiirka amuuraha dibada Iswiidhen Carl Bildt ayaa ka labo labeynaya howl-gal militari oo lagu qaado Suuriya oo aan looga heysanin ogolaansho Qaramada Midoobeyn..
Maalinkii talaada waxuu TT u sheegey in ay aad muhim u tahaye in la sugo in ay howl-shooda ka soo dhameysanayaan oo warbaxintooda soo bandhigayaan gudiga Qaramada Midowdey u saartey baaritaanka eedeymaha la sheegayo ee ah in la isticmaaley hubka wax gumaada ee sunta ah.
Dhanka kale Hans Blix, oo horey u ahaan jirey kormeerahii QM ee dalka Ciraaq ayaa aad u diidan weerar lagu qaado Suuriya. Waxuuna qabaa in garabyado ay wadoshaqeeyaan si looga helo golaha QM canbaareyn ku soocta maamulka Suuriya.
- Sida ay hada wax u socdaann is-faham laguma helayo balse waxey sii kalo fogeyneysaa Mareykanka iyo xulafadiisa oo dhan ah iyo Ruushka iyo Shiina oo dhan ah. Hadii arinta sidaan ku sii socoto waxaa loo arkeyaa in Mareykanka weli ku taaagan yahey dhabahiisa Bush oo ahaa in Mareykanka yahey booliiska caalamka ee aan waxno weydiin golaha amniga ee QM, ayuu yeri Hans Blix kormeerihii hore hubka ee QM u qaabilsanaa dalka Ciraaq.